Kedu ka Shopify si arụ ọrụ? | ECommerce ozi ọma
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Ahịa ahịa
Shopify bụ ụlọ ọrụ e-commerce nke Canada nke dị na Canada na-emepe sọftụwia nke otu aha, nke na-ahụ maka ịnye usoro ọrụ gụnyere ịkwụ ụgwọ, ahịa, mbupu na ngwaọrụ. ezigbo ndị ahịa iji mee ka usoro nke iberibe intaneti di nfe nye ndi obere ahia di nfe.
Na nnukwu ngwa ọrụ maka azụmahịa kọmputa, dịka ị ga-enwe ike inyocha na obere oge. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, Shopify na-emepe ọtụtụ ohere na-adọrọ mmasị maka azụmahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ edemede gị. Site na nke a, ị kwesịrị ị na-eburu n'uche site ugbu a gaa na ọ bụ ngwa ọrụ ị nwere ike iji bulie ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa gị n'ịntanetị.
Mana ịchọrọ ịma etu Shopify si arụ ọrụ. Ọfọn, ọ bụ ngwá ọrụ dijitalụ nke na-enye gị ohere ịre ngwaahịa gị na ịntanetị na-enwe ike ịmepụta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na-amasị gị na-enweghị mkpa maka mmemme mmemme. Agbanyeghị na ọ bụghị otu kachasị mara amara, ọtụtụ azụmaahịa na-amalite amalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị iji Shopify. N'ime ihe ndị ọzọ n'ihi na ndị ọrụ ya anaghị achọ ihe ọmụma pụrụ iche maka ojiji ya.
1 Shopify: nhazi ya na oru ya
2 Ezubere maka ụdị ngwaahịa niile
3 Nabata iwu ngwa ngwa
4 Nka na ụzụ e ji nnọọ kwere ka gị mkpa
5 Ọ na-egosi nnọọ kensinammuo interface
6 Na-ebuli SEO
7 Ọzọ nke kacha baa uru
Shopify: nhazi ya na oru ya
Ọ bụ usoro ga-ewetara ndị ọrụ ọtụtụ uru dị iche iche, dịka ị ga-ahụ n'okpuru. N'ihi na mgbanwe ya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ọ bụla sitere na echiche niile. Site na onyinye ndị a anyị ga-ekpughere gị n'okpuru:
Na usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche
Nke a bụ otu n'ime njirimara na-akọwapụta ihe atụ a ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya. N'ihi na na njedebe nke ụbọchị o nwere ihe karịrị mkpụrụ ego 70 nke ịkwụ ụgwọ mba ụwa na-enye gị ohere ire na mpaghara na mba ndị ọzọ. Will gaghị enwe ihe ngọpụ maka ịchọtaghi ngwa agha iji rụọ ọrụ na azụmaahịa kọmputa gị.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, echefula na ị nwere ike ịhọrọ ihe nlereanya kachasị dabara na njirimara gị dịka onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa nke ikpo okwu n'ịntanetị. Ga-enweta nkwado ego mgbe niile iji nyefee ịkwụ ụgwọ nke ịzụrụ, mgbe niile site na mba ụwa.
Ezubere maka ụdị ngwaahịa niile
Ọzọ nke isi uru ya bụ na ị nwere nnukwu ohere, ọ na-enye ndị ahịa gị ụdị ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu. Na-akparaghị ókè n'ụzọ na isi na ha nwere ike ibubata ma ọ bụ bufee site na usoro nke ngwa teknụzụ nke mere na m nwere ike ịkwado ọrụ a nke ga-adị oke mkpa na ọrụ ọkachamara gị.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bụ ohere ga-emepe emepe nye gị site ugbu a ka i wee gbasaa ohere azụmaahịa gị n'ụzọ ziri ezi ma kwụ ọtọ n'otu oge ahụ. Karịsịa n'oge mgbasawanye na azụmaahịa gị yana obere ngwaọrụ ha na-enye gị n'echiche a. N'aka nke ọzọ, ịdị irè ya kachasị ma ị ga - enwe ike ịchọpụta nsonazụ ya ọsịsọ.
Nabata iwu ngwa ngwa
N'ezie, ọ bụ ọzọ n'ime njirimara ya kachasị dị mkpa n'ihi na ị ga-enweta ozi email ma ọ bụ nkwupụta mkpanaka oge ọ bụla ị nwetara ọrịre ọhụrụ. Ndị ahịa dị ka ngwa ngwa nke ọrụ a ma site na nke a, usoro a bụ otu n'ime afọ ojuju ị nwere n'oge a. N'ime ihe ndị ọzọ n'ihi na ọ na-enyere gị aka jikwaa iwu na oge dị mkpirikpi, enwere ike ịgwọ ya na obere sekọnd. Iji mechie usoro a na afọ ojuju dị ukwuu maka ndị abụọ na-etinye aka na ya, dịka ọchịchọ ha si dị.
N'aka nke ọzọ, echefughi na ọ bụ ngwa ọrụ na-akọwapụta ọrụ ndị anyị kwurula banyere ya na oke arụmọrụ. Yabụ n'ụzọ dị otu a, ịghara ichegbu onwe gị maka ihe ndị ọzọ ma lekwasị anya na ọrụ ndị ọzọ dị oke mkpa na ọrụ nke ọrụ gị site ugbu a. Nke ahụ bụ, ka emechara, kedụ ihe metụtara okwu ndị a akọwapụtara maka ndị ọchụnta ego na ngalaba a pụrụ iche.
Ọ dị mfe itinye, ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ dị obere ihe dị mkpa bụ na otu n'ime onyinye ya kachasị mkpa na-erite n'eziokwu bụ na njikwa ya n'ịntanetị dị mfe maka ndị ọrụ niile. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ị ga-ahụ na ọ ga-adịrị gị mfe ịmepụta, hazie ma kwadebe ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ịmalite ịmalite ire n'oge dị mkpirikpi, ị nwekwara ike ịmepụta blog iji kwalite ụlọ ahịa gị na ya. Ebe ọ bụ na ọ bụ mgbe ị gachara ebumnuche ị tụpụtara mgbe ịmalitere ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na n'usoro njirimara ndị ọzọ anyị ga-ekpughe gị ọzọ.
Nka na ụzụ e ji nnọọ kwere ka gị mkpa
Usoro nchịkwa a n'ịntanetị bụ n'ezie nnukwu ohere maka onwe gị na ọdịmma gị n'ime azụmahịa kọmputa. N'ime ihe ndị ọzọ n'ihi na ọ na-enye gị bandwit akparaghị ókè, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị banyere ịkwụghachi ụgwọ dabere na okporo ụzọ ụlọ ahịa gị ma ọ bụ ndị ọbịa.
Na mgbakwunye, yana nsonaazụ nke onyinye a, enweghị obi abụọ na n'ikpeazụ ọ ga-enyere gị aka nwere mmefu ego n'ime ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ bụ, site na ya ị nwere ike ịchekwa ego karịa ka ị nwere ike iche n'echiche site na mbido. Bụ ihe karịrị ihe kpatara ị ga-eji webata ya site n'oge a. Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ ga - egosi gị na ị nwere ike ijikwa azụmahịa dijitalụ gị nke ọma karịa site na sistemu ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ nwere ọkaibe ma ọ bụ karịa karịa maka nsonaazụ ha.
Ọ na-egosi nnọọ kensinammuo interface
Ọzọ n'ime onyinye ya kachasị mkpa bụ nke sitere na eziokwu ahụ bụ na njikwa nke ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ka ọ dị mfe karị n'ihi na nnukwu ịdị mfe nke na-eweta interface ya. Ọ dịghị mkpa ịnwe ahụmịhe gara aga iji mara otu esi ejikwa ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. N'echiche a, ị ga-echeta site ugbu a gaa na Shopify na-enye gị ihe niile ịchọrọ ka ọ bụrụ, n'ihe gbasara sekọnd, ị nwere ike ịmata etu sọftụwia si arụ ọrụ, yana ị nweta ọtụtụ ọrụ na njirimara ya. na-akọwapụta na nke a.
N'aka nke ọzọ, interface a nke mmemme a na-eme ka ọ dabara na profaịlụ nke ndị ọrụ niile dịka ọ na-agbanwe agbanwe na ọrụ ọ na-ewe. Ruo n'ókè na ọ ga-abụ usoro kensinammuo na ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị imefusị ọtụtụ oge na-eme nchọgharị. Dịka ọ ga - enye gị ohere ịnata okporo ụzọ dị elu na nke ahụ bụ ihe ga - enyere gị aka ịmezu ebumnuche gị kachasị ịchọrọ site na itinye obere mbọ n'akụkụ gị.
N'ime njirimara ndị a, ị gaghị echefu na mmemme a na njikwa nke ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa dijitalụ ga-eme ka ọrụ njikwa gị dị mfe site na mmalite. Ya mere, ọ bụ ngwa ọgụ dị ike maka gị ịzụlite azụmaahịa gị nke nta nke nta yana n'ụzọ dị oke mkpa, karịa sistemụ ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya site na isi echiche niile. N'ịbụ onye, ​​ka emechara, kedu ụdị ọrụ a pụrụ iche.
Shopify na-enyekwa gị ngwaọrụ zuru oke iji mezuo ebumnuche a echere ogologo oge. Ọ bụ ezie n’okpuru usoro ntuziaka ndị ị ga-emerịrị n’echiche n’oge njikwa gị. Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ bụ ngwa na - enyere gị aka ịmepụta blọọgụ iji nye ndị ọrụ ọdịnaya ndị ọzọ, gbasaa obodo azụmaahịa gị ma jiri ya kwalite ụlọ ahịa gị. Na mmetụta ezi uche dị na ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu gị niile.
Ọ bụ ezie na akụkụ ọzọ nke na - enye gị ohere ebuli bụ nke nwere ihe jikọrọ ya na onyogho enwere ike inye site na weebụsaịtị webụsaịtị anyị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ruo n'ókè na ọ nwere ike ịbụ ihe dị iche iche megide asọmpi ahụ iji gboo ọchịchọ sitere n'aka ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ. N'echiche a, enwere ike iji ya dị ka ohere azụmaahịa karịa ụdị echiche ndị ọzọ dị iche iche. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, enwere ike ịkwalite usoro azụmaahịa n'oge kachasị dị mgbagwoju anya maka mmepe ya na nke ahụ bụ otu n'ime ebumnuche ya niile ruo oge ụfọdụ.
Ọzọ nke kacha baa uru
Na Shopify, ịmepụta na ịmalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ihe gbasara sekọnd. Otu uru dị mkpa bụ ịba uru ịmalite azụmaahịa ọnlaịnụ na obere oge. Ikpo okwu na-eduzi gị nzọụkwụ site na usoro nke ịtọlite ​​ụlọ ahịa gị, na-ahazi ya na mmasị gị, na-emepe atụmatụ ahụ na, n'ikpeazụ, na-agbakwunye ngwaahịa gị. Na a dị mfe usoro nke omume na-agaghị na-ewe nkeji ole na ole ma ọ bụ awa, dabere na ntọala ị na-ebu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na i jiri ọtụtụ awa ma ọ bụ ọnwa ole na ole were ya na ndị ọrụ ndị ọzọ, ị ga-ahụ na ị na-echekwa oge dị ukwuu yana, ikekwe, akụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ka Shopify si arụ ọrụ?
Enyemaka ecommerce metụtara nsogbu